Warshadaha Products - Soosaarayaasha Alaabada Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
COVID-19 (SARS-CoV-2) Dhex-dhexaadinta Antibody Test
Anti-SARS-COV-2 Dhex-dhexaadinta Antibody Test (Immunochromatography) waxaa loogu talagalay in lagu ogaado ficil-celinta tayada ee antibodies-ka dhexdhexaadka ka ah SARS-CoV-2 ee shay-baarka aadanaha ama tijaabada dhiigga.Ka-hortagga unugyada difaaca jirka ee 'SARS-CoV-2' ayaa xannibi kara is-dhexgalka ka dhexeeya xayiraadaha xayiraadaha ee fayraska 'glycoprotein virus' (RBD) oo leh 'angiotensin' oo loo beddelayo enzyme-2 (ACE2). Baaritaanka waxaa loo isticmaali karaa in lagu ogaado wax kasta oo antibody ah oo ku jira serum iyo plasma oo dhexdhexaad ka dhigaya isdhexgalka RBD-ACE2 Tijaabadu way ka madax bannaan tahay noocyada iyo noocyada loo yaqaan 'isotype'.
Tube Muunad la tuuro
Badeecadani waxaa loo isticmaalaa in lagu soo ururiyo shaybaarka ogaanshaha fayraska dhuunta ama dheecaanka sanka, iyo shaybaarada suufka waxaa lagu keydin doonaa qalabka dhaqanka, kaas oo loo isticmaali karo ogaanshaha viruska, dhaqanka iyo go'doominta.
Baadhitaanka Duumada Pf Ag waa dhakhso chromatographic immunoassay socodka ogaanshaha tayada ee Plasmodium falciparum (Pf) protein gaar ah, Histidine-Rich Protein II (pHRP-II), ee tijaabada dhiigga aadanaha. Qalabkan waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo baaritaanka iyo caawimaadda baaritaanka cudurka ee plasmodium. Muunad kasta oo falcelin leh oo la socota Duumada Pf Ag Rapid Test waa in lagu xaqiijiyaa hababka kale ee tijaabooyinka iyo natiijooyinka caafimaad.
HIV-1/2 Ab Plus Combo Rapid Test waa tallaal socosho socod ah oo lagu ogaanayo isla markaana lagu kala duwanaan karo anti-HIV-1 iyo anti-HIV-2 antibodies (IgG, IgM, IgA) ee serum, plasma, ama gebi ahaanba dhiig. Waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo baaritaanka iyo caawimaadda ogaanshaha infekshanka HIV.